Izinduku ze-graphite Abakhiqizi nabahlinzeki | I-China Graphite rod Factory
Graphite lubricating ikholomu / Rod / Graphite Lubricant Ibha
Ngenxa yezici zayo zokwakheka, i-lubricant eqinile. Induku encane yokuzigcoba eyenziwe ngamandla aphezulu kanye ne-high-purity graphite ilungele amabheringi okuzithambisa angenawo uwoyela, amapuleti azithambisayo, amabombo okuzithambisa, njll. Ngempahla yokumelana nokugqoka kanye nokumelana nokushisa okuphezulu, ukonga okokusebenza okubasa, bekulokhu kubaluleke kakhulu ekwakhiweni kwezimboni zamasosha nezanamuhla nobuchwepheshe obuphakeme, obusha nobuchwepheshe. Umsizi omncane we-graphite ungomunye wemikhiqizo ye-graphite yezicelo zezimboni, kunciphisa kakhulu ukugcinwa kwemishini, izindleko zikaphethiloli, kufinyelele injongo yazo zombili i-lubrication kanye ne-non-oil processing workpieces.
Induku ye-graphite enentonga yethusi
Lo mkhiqizo ungasetshenziswa njenge-carbon arc electrode kubuchwepheshe bensimbi yokushisela. Induku yokugubha umoya onekhabhoni inezinzuzo zokusebenza kahle kakhulu, umsindo ophansi nokusebenziseka okubanzi. Isetshenziswa kabanzi ekubunjweni, kubhayela, ekwakheni umkhumbi, embonini yamakhemikhali nakwezinye izimboni ukuze kukhanye i-carbon ephansi, insimbi yensimbi, insimbi engagqwali, ithusi nezinye izinsimbi.
Ukuhlanzeka Okuphezulu Isostatic Ukucindezela Umsizi
I-Isostatic Pressing Graphite wuhlobo olusha lwezinto ze-graphite ezakhiwa ngawo-1940 ngochungechunge lwezakhiwo ezinhle kakhulu. I-Isostatic Pressing Graphite inokumelana okuhle nokushisa. Kugesi we-inert, amandla ayo wokusebenza akhula ngokwanda kwezinga lokushisa, afinyelela inani eliphakeme cishe ku-2500 ℃ .Iqhathaniswa ne-graphite ejwayelekile, ukwakheka kwe-isostatic graphite kuhlangene kakhulu, kubucayi, futhi kuyalingana. I-coefficient yayo yokunwetshwa okushisayo iphansi kakhulu, ukumelana kwayo nokushisa okushisayo kuhle kakhulu, futhi isotropic yayo, ukumelana nokugqwala kwamakhemikhali kuqinile, okwamanje, kune-conductivity enhle yokushisa negesi nokusebenza okuhle kwemishini.
I-Spectrum Pure Graphite Rod
I-Spectral pure graphite rod kufanele ihlanzeke kakhulu, ikakhulukazi ekuhlaziyweni kwekhwalithi yezakhi zokulandela ngomkhondo, ukungcola okuncane kakhulu akuvunyelwe ukuba kube khona. Ngokuvamile, ukungcola kwezinto ze-graphite ezisetshenziselwa ukuhlolwa ekuhlaziyweni kwe-spectral kufaka phakathi i-Al, B, Ca, Cu, Fe, Mg, Si, Ti, V njll ngokungeziwe, i-K, Mn, Cr, Ni, njll. . Ngenxa yokwenza ngcono nokusetshenziswa kocwaningo oluphakeme lokuhlanza kanye nobuchwepheshe bokuhlanzwa ezimbonini ezihlobene, cishe akukho ukungcola okungatholakala manje, futhi ukwenziwa kwezimboni kwentonga ephezulu ye-graphite yokuhlaziywa kwe-spectral kufezekisiwe.